China Marine azuokwara Oligopeptide factory na suppliers | Huayan
Isi Iyi: Akuko mmiri maka azu
Agba: White ma ọ bụ odo odo
Isi: Obere azụ
Molekụla Arọ: 500 ~ 1000Dal, 300-500Dal
Njirimara: Nnukwu protein, enweghị mgbakwunye, obere mkpụrụ ndụ nwere ike itinye uche n'ụzọ dị mfe.
1.Effective dozie anụ ahụ na akwara mmiri Mbelata nsogbu, adọ emeju na collagen ka anụ na-eto eto.
2.Tight jikọtara calcium na mkpụrụ ndụ ọkpụkpụ, enweghị ọnwụ ma ọ bụ mbibi.
3.Repụ cornea mmiri na uzo, ma nwekwuo nghọta.
4.Ekwalite njikọ chiri anya nke mkpụrụ ndụ akwara iji mee ka ha na-agbanwe ma na-egbu maramara.
5. Dezie endocrine, kpuchido ma melite ọrụ visceral.
6. Ejikọtara ya na globulin na-alụ ọgụ, na-emewanye ọgụ.
Nchọpụta nke akụrụngwa, teknụzụ dị elu, dị elu karịa usoro nchịkwa, nkọwapụta nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa, iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu ma dịkwa mma.
Na-aga n'ihu mmepụta ike, ezi uche yiri nkata, iji nye ndị ahịa na-ezu ngwaahịa.
3. Teknụzụ ọrụ
4.Provide oge zuru ezu mgbe-ahịa ọrụ.
5.Originate si ahụike Hainan Island, họrọ ihe ndị dị mma ma jeere ụwa ozi.
1.Do ụlọ ọrụ gị nwere asambodo ọ bụla?
Ee, ISO, HACCP, HALAL, MUI.
2.What bụ opekempe iji buru ibu?
Na-emekarị 1000kg mana ọ bụ ihe a na-agbanwe agbanwe.
3.Etu esi ebu ngwongwo?
A: Ex-work ma ọ bụ FOB, ọ bụrụ na ị nwere ebugharị na China. B: CFR ma ọ bụ CIF, wdg, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị buru gị ụgbọ. C: More nhọrọ, ị nwere ike na-atụ aro.
4.Kedu ụdị ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
T / T na L / C.
5.What bụ gị mmepụta ụzọ oge?
Ihe dị ka ụbọchị 7 ruo 15 dị ka iwu ọtụtụ na nkọwapụta si dị.
6.Can ị nabata nhazi?
Ee, anyị na-enye OEM ma ọ bụ ODM service.The Ntụziaka na akụrụngwa nwere ike dị ka gị chọrọ.
7.Could ị na-enye samples & ihe bụ sample nnyefe oge?
Ee, ejikari anyị ga-enye ndị ahịa free samples anyị mere tupu, ma ahịa kwesịrị ibute ibu na-eri.
8. you na emeputa ma obu ahia?
Anyị bụ ndị emeputa ke China na anyị factory emi odude ke Hainan.Factory nleta bụ welcome!
Nke gara aga: Koodu Azụ Collagen Peptide
Osote: Tilapia Azụ Collagen Peptide